पूर्ण सरसफाइ अभियान अब स्वास्थ्य, वातावरण र जीविकोपार्जनमा केन्द्रित हुनुपर्छ : समाजशास्त्री अधिकारी – WASHKhabar
६ माघ २०७७, मंगलवार ०९:२४ 1344 पटक हेरिएको
खुला स्थानमा दिसा गर्नेहरुलाई दिमागमा झड्का लगाउँदै ती व्यवहारप्रति घृणा उत्पन्न गराउने र खुला ठाउँमा दिसा गर्ने बानीलाई पूर्ण रुपमा बन्द गराउनका लागि ‘प्रज्वलन’ गर्ने विधि अपनाइएको थियो । ‘प्रज्वलन’ गर्ने विधि खुला दिसामुक्त गराउनका लागि ‘समुदायमा आधारित पूर्ण सरसफाइ’ अन्तर्गत नयाँ पद्धति र अवधारणा थियो । खुला दिसामुक्त अभियानमा जस्तै पूर्ण सरसफाइ अभियानको चरणमा प्रज्वलनको अवधारणा र विधि कस्तो हुनुपर्ला ? पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजनाले पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनका विधि, पद्धति र तौरतरिकालाई कसरी दिशानिर्देश गर्ला ? लगायत बिषयमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका समाजशास्त्री कमल अधिकारी सँग वास खबरका अतिथि सम्पादक विनोद धौलागिरीले गर्नुभएको कुराकानी ।
पूर्ण सरसफाइ अभियानको चरणमा प्रज्वलनको अवधारणा र विधि कस्तो हुनुपर्ला ?
हामीले खुला दिसामुक्त अभियानको थालनीदेखि अहिले पूर्ण सरसफाइ अभियानको चरणसम्म आइपुग्दा प्रज्वलनका मौलिक विधिहरु प्रयोग ग¥यौं । दिमाग प्रधान भन्दा पनि दिलप्रधान विधिहरुलाई हामीले मौलिक विधिको रुपमा अघि बढायौं ।
हिजोका दिनमा हामीले सरसफाइलाई आत्मसम्मान र स्वाभिमानको विषयको रुपमा जोड दिएका थियौं, र त्यससँगै स्वास्थ्य र विकासलाई समेत जोडेका थियौं । तर, सरसफाइ र विकासबीचको अन्तरसम्बन्धमा धेरै जोड दिन सकेका थिएनौं, विकासको सवाल केही पछाडि परेको थियो ।
अबको प्रज्वलन भनेको योजनाको चरणदेखि नै थालनी हुनुपर्छ । आवश्यकता पहिचान, सरोकारवालाको विश्लेषण, श्रोत साधन पहिचान र परिचालन, विभिन्न विषयहरुको कार्यकारण सम्बन्ध पत्ता लगाउने र विभिन्न विषय बीचको अन्तरसम्बन्धलाई अबको चरणमा स्थापित गर्नुपर्छ । अबका दिनमा, सरसफाइलाई स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको विषयको रुपमा स्थापित नगरेसम्म सफल हुन सकिदैन । त्यसेले, अबको पूर्ण सरसफाइ भनेको विकासका लागि, वातावरणीय दीगोपननका लागि, स्वास्थ्य र समग्रमा समृद्धिका लागि हुनुपर्छ ।
हिजोका दिनमा जस्तो दिसा कोट्याउने या झिंगाको खुट्टा गनेर दिसाको हिसाव गर्नेजस्ता विधि अबको चरणमा काम लाग्दैनन् ।
पूर्ण सरसफाइको चरणमा व्यवहार परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ, र जीविकोपार्जनलाई समेत सँगसँगै जोडेर लैजानुपर्ने छ । यसका लागि सहयोगी विधिहरुको प्योकज नै तयार गर्न सकिदैन ?
हिजोका दिनमा प्रज्वलन भन्ने कुरा एकल विषयको रुपमा रहेको थियो । तालिम अलग्गै थियो, योजना अलग्गै थियो, समुदायमा परिचालन अलग्गै थियो, समुदायमा गएर फेरी प्रज्वलनका विधि प्रयोग गरिन्थ्यो । अब भने त्यसरी अलग अलग गरेर हुँदैन ।
आधाररेखा सर्वेक्षण गर्छौं भने त्यसको नतिजाबाट नै प्रज्वलित गर्नुपर्छ ता कि गतिलो योजना बन्न सकोस्, कार्यान्वयनको प्रक्रिया गतिलो बनेस् र अनुगमन सँगसँगै प्रभावकारी हुन सकोस् । विभिन्न विषयको कार्यकारण सम्बन्धको खोजी गरी त्यसलाई सम्बोधन हुनेगरी योजना गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पालिकाभित्र बहुविषय र पहुपक्ष छन् । त्यहाँ प्रशासन छ, सुरक्षा छ, कृषि पशुपालन, सामाजिक विकास सबै छन् । स्वास्थ्य र शिक्षा त झनै विशाल विषय छन् । वातावरण र न्यायका आफ्नै इकाइ र संरचना छन् । यी सबैलाई एकीकृत रुपमा लैजानुपर्छ, र सरसफाइलाई सबै विषयसँग अन्तरसम्बन्धित विषयको रुपमा लैजान सक्नुपर्छ ।
पूर्ण सरसफाइका लाागि गरिने प्रज्वलनमा यी र यस्तै यति वटा विधि हुन्छन् भन्नुभन्दा पनि पूर्ण सरसफाइलाई अन्य सबै विषयसँग जोडेर, वातावरण, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनसँग सँगै लैजानेगरी प्याकेज तयार गर्न सकिन्छ, र गरिनुपर्छ । यसका लागि गरिने अबका प्रयासहरु तथ्य, खोज र अनुभवमा आधारित भएर गरिनुपर्छ । पूर्ण सरसफाइ जीविकोपार्जन र आर्थिम भौतिक समृद्धिसँग जोडेर लगिएन भने अब समुदायले पत्याउँदैन ।
त्यसो भए पूर्ण सरसफाइका अबका मुख्य सूचक कस्ता हुनुपर्ला ?
चर्पीको निर्माण, समुचित प्रयोग र स्तरोन्नति त भैहाल्यो । यसबाहेक स्वास्थ्य र वातावरणसँग जोडिएका पानीको शुद्धीकरण, दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन र व्यक्तिगत सरसफाइ भए पुगिहाल्यो नि । अन्य सानातिना विषयलाई यिनी सूचकभित्र राख्न सकिन्छ । जुन विषयको ँचभत्रगभलअथ र स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर बढी छ, तिनैलाई मुख्य सूचक बनाएर लैजानुपर्छ ।
अब बन्दै गरेको पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजनाले पूर्ण सरसफाइ प्रबर्द्वनका विधि, पद्धति र तौरतरिकालाई कसरी दिशानिर्देश गर्ला ?
साझेदार संस्था एवम् निकायहरुबीच साझेदारीको अवधारणा, सरसफाइको अन्तरसम्बन्ध लगायतका विषयलाई पूर्ण सरसफाइ गुरुयोजनाले केही दिशानिर्देश गर्न सक्छ । हिजोका दिनमा खुला दिसामुक्त अभियानका क्रममा हामी दिमागप्रधान नभएर दिलप्रधान रुपमा अघि बढ्यौं । अब भने योजना, साधन श्रोतको पहिचान, सरोकारवाला विश्लेषण, स्वास्थ्य र सरसफाइदेखि जीविकोपार्जन, आर्थिक समुन्नति र समग्र विकासको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । गुरुयोजनाले यसलाई एउटा Framework मा राखेर दिशानिर्देश गर्न सक्छ ।